Umculi akazisoli ngokugxeka ilokishi laKwaMashu
UMCULI uMthokozisi Ndaba owathathwa eKwaMashu kulesi sithombe esigciniwe. Doctor Ngcobo/African News Agence (ANA)
BONGIWE ZUMA | January 13, 2020
AKALIBONI nelincane iphutha ngokuveza indlela asezizwa ngayo ngelokishi laKwaMashu umculi owazakhela igama kuma-Idols uMthokozisi Ndaba. Lo mculi uthole okukhulu ukugxekwa ezinkundleni zokuxhumana ngempelasonto kulandela ukuthi eveze ukuthi akasaziboni ephila kule ndawo.
UMthokozisi utshele leli phephandaba ukuthi ubhale ukuthi usenele ngendawo yangakubo ngenxa yesilonda esingapholi. Ebhala ekhasini lakhe ku-Instagram uMthokozisi uthe ilokishi lakhe libolile.
"Ngangizitshela ukuthi abantu abashiya ilokishi bajahe impilo yasemadolobheni ababoni, kodwa manje sengiyabona, sekuyisikhathi sokuthi sishiye nomndeni wami," usho kanje. Ngesikhathi ebala izinto eziwushevu elokishini ubale izingxoxo ezingakhulisi, ukuhleba, umona, ukweba kanye nomoya omubi.
Ukwehlelwa izigameko ezimbi zobugebengu izikhathi zilandelana kuhlala kuvuke kuyena uma eKwaMashu nokwenza asabele umndeni wakhe. Uveze ukuthi ziningi izigameko zobugebengu nodlame ezimehlele kule ndawo nezimphindisele emuva ngokwempilo.
"Bengikusho ngezizathu eziningi ezingehlele endaweni yangakithi. Ngake ngadutshulwa ngadunwa nemoto kule ndawo. Ngiyagqekezela, sengike ngaphucwa amaselula kaningi. Uma kuzwakale kabi ngingakunikeza amanzi okuphuza wehlise," kusho uMthoko.
Eqhuba uthe ubonile ukuthi abantu abaningi bayithathele phezulu lento akhuluma ngayo kodwa uzitshelile ukuthi ngeke ayifake enhliziyweni ngoba inkinga yobugebengu iyaziwa ngale ndawo.
"Ngithuke sengifonelwa ngise mngcwabeni ngoba abantu bese bekhuluma kabi sebebhala nezinto ezingehli kahle emndenini wami. Ubugebengu nokugqekezelwa ngiyazi kuyenzeka ezindaweni eziningi kodwa ngoba yimina obhaleli sengibukeka kabi engathi abantu abazi ngobugebengu. Abantu abayeke ukuthathela izinto phezulu bafundisise into ebhaliwe, uma umuntu engayizwa kahle abuzisisi," kusho uMthokozisi.